Ixesha kunye nabahlobo 13
Ngaba abafileyo bahlala kwiintsapho, kuluntu, kwaye ukuba ngaba kukho urhulumente?
Abo babuyelelayo obu bomi baphumla ixesha elide okanye lifutshane, ngokweemfuno zabo. Baye ke baqhubeke nobomi babo emva kwakwilizwe emva kokuphila kwabo emhlabeni. Kodwa kukho lo mahluko, kuba ubomi emhlabeni bufuna yonke imigaqo-siseko yendoda ukuba ibekhona kweli lizwe, emva kwendawo ifuna kuphela isithuthi esifanelekileyo kwiplanethi apho ingqondo, i-ego, isebenza khona.
Ngaba umntu uye wazihlalela nosapho lwakhe okanye uluntu emhlabeni ngokwalo mnqweno wakhe, iya kuba ngumnqweno wakhe wokuqhubeka nale ndlela yobomi kwimeko yasemva kokusweleka. Ukuba ukhetha ubomi obodwa, okanye ubomi ozinikele ekufundeni okanye kuphando, ngekhe anqwenele ubomi phakathi kwabanye; kodwa kuzo zombini ezi meko, ngokwendlela umnqweno wakhe ebomini bomzimba, uya kuqhubeka nokukhula komnqweno wakhe emva kokuba efile.
Emva kokuba umntu efile, umntu, ingqibelelo, ingqondo, iyaqhubeka nawo onke amandla akhe, kodwa thabatha umzimba wenyama kunye nendlela yenyama yomzimba. Naphi na apho acinga khona kunye nomdla wakhe apho ulele khona. Xa, nangona kunjalo, ingqondo yahlululwe lihlabathi ngokuzahlukaniswa komzimba wayo wenyama, isixhobo sokuthetha kunye nonxibelelwano kunye nomhlaba wenyama sinqunyulwe kwaye indoda ayinakuba kunye nemizimba yenyama yosapho okanye uluntu olwaluhlala kuyo ingcinga yakhe. Ukuba, nangona kunjalo, ingcinga yakhe yosapho okanye yoluntu yayinamandla wayeya kuba ecinga kunye nabo okanye ababambe kwingcinga yakhe njengoko kunokuba njalo ukucinga kusapho okanye kubahlobo bakhe ngelixa behlala emhlabeni nangona yena ehlala kude ilizwe. Ubengenakuba neengcinga ezintsha, angafumani lwazi malunga nosapho okanye uluntu emva kokubhubha kwakhe, okanye abe malunga nabo ukuba balazi ikamva labo, njengoko kusenokwenzeka njalo ngempazamo. Emva kokuba umntu efile uphila ngeengcinga awayenazo ngelixa wayesobomi bokwenyama. Ucinga kwakhona kwakhona ngento awayecinga ngayo ebomini.
Kukho umhlaba weengcinga, othi emva kwawo wonke umhlaba umntu ahlala kuwo nokuba usemzimbeni wenyama, kuba umhlaba ukuye njengoko eliguqulela kwihlabathi lakhe lokucinga. Kodwa kukho elinye ilizwe eliphakathi kwehlabathi lokucinga kunye nehlabathi elibonakalayo ukuba lithengiswe iziyobisi okanye linxila. Umnqweno uya kuba yinto ebalaseleyo. Umbono onjalo unokwenza into efanayo naphantsi kwempembelelo yechiza okanye iziyobisi. Nangona kunjalo, umnqweno uya kuzenza ubonakale kanye njengokuba inxila libonakalisa umnqweno walo. Kuphela kukubonakala okumbalwa kwemizimba yeminqweno apho ingqondo ikhona. Njengomqondo okhethwe ngobomi bosapho okanye ubomi babahlali njengeyona nto ifanelekileyo kwihlabathi layo lomzimba, ngokufanayo ingqondo efanayo iya kubamba usapho okanye ubomi boluntu kwihlabathi elifanelekileyo lokucinga kwimeko yalo yokufa. Kodwa ngelixa kweli lizwe lokubonakalayo ubomi obufanelekileyo babubonakala bungathathi ntweni kwaye bubomi bokwenyani obuyinene kwaye buyinyani, ngoku imeko ibuyela umva; Umhlaba olungileyo ngowokwenyani kwaye nomzimba uphulukene ngokupheleleyo okanye umane uhlala ungoyilo.
Ewe, kurhulumente kurhulumente emva kokusweleka. Ilizwe ngalinye emva kokusweleka linorhulumente walo kunye nemithetho elawula ilizwe ngalinye. Umthetho welizwe lomnqweno uboniswa ngegama lakhe: umnqweno. Umhlaba olungileyo ulawulwa ziingcinga. Ilizwe ngalinye lilawulwa ngokuzenzekelayo ngumnqweno, okanye ingcinga efanelekileyo, nganye ngokwemvelo yayo, kwaye konke ngokobulungisa.
Ngaba kukho isigwebo okanye umvuzo ngenxa yezenzo ezenziwa ngabafileyo, mhlawumbi ngexesha lobomi okanye emva kokufa?
Ewe, kwaye isenzo ngasinye sizisa isiphumo saso, ngokwentshukumo nangokungqinelana nesizathu kunye nengcinga ebangela inyathelo. Uninzi oluninzi olwenzayo kweli lizwe lenza into ngokungazi, nangona inyathelo lizisa umvuzo okanye isohlwayo. Lowo utsala isiqu sompu angaziyo ukuba usilayishe kwaye ukhuphe umnwe wakhe, okanye isandla somhlobo, ukhathazwa ziziphumo ngokwasemzimbeni ngokungathi udubule ngenjongo yokwenzakala. Ukohlwaywa ngokwasemzimbeni kuyafana. Kodwa ke akakuvumi ukohlwaywa ngengqondo okwakuza kuzisola, ebeza kubandezeleka ukuba enze isenzo esazi ukuba kuya kwenzeka ntoni.
Oku kusebenza kumbuzo ngelixa uphila kwihlabathi elibonakalayo. Kodwa likho elinye icala elilelasemva kokubhubha ekufeni. Abo bakwimeko yokufa emva kokusebenza kuphela njengeziphumo ezilandelayo. Eli lizwe lilizwe loonobangela kunye neziphumo, kodwa emva kwamazwe kuphela ziziphumo. Umzimba womnqweno uyaqhubeka nokusebenza emva kokuba uswelekile ngokwamandla okuvuselela oko ngexesha lokuphila komzimba. Ke ngoko, imisebenzi eyenziwayo liziko le-astral, okanye nangengqondo yehlabathi elilungileyo, ziziphumo kuphela, hayi ezonobangela. Yiziphumo ezinje ngomvuzo okanye isohlwayo sezenzo ezenziweyo kwihlabathi elibonakalayo. Kodwa ezi zenzo azizuvuzwa okanye zohlwaywa.
Amagama athi "umvuzo" kunye "nesohlwayo" yimiba yezakwalizwi. Banentsingiselo yobuqu kunye nelokuzingca. Nokuba kungoku okanye kulo naliphi na elinye ilizwe, umthetho wokwenene uguqula isohlwayo sithetha isifundo esinikwe umenzi wesenzo esingalunganga. Umvuzo sisifundo esinikwe umenzi wesenzo esifanelekileyo. Isifundo ekubizwa ngokuba sisohlwayo sinikwa umenzi ukuba amfundise ukuba angaphindi enze okubi. Umvuzo ufundisa ngemiphumo yesenzo esifanelekileyo.
Kwimeko yasemva kokusweleka, umzimba onqwenelekayo uhlupheka ngokufana nendoda eyomeleleyo, xa ingenandlela okanye nethuba lokwanelisa inkanuko yakhe. Umzimba wenyama yinto ephakathi apho umzimba onqwenela ukwanelisa inkanuko yakhe. Xa lo mnqweno unqunyanyiwe okanye unqunyulwa emzimbeni wakhe wasenyameni xa usifa, iminqweno iyasala, kodwa ingenayo indlela yokwanelisa. Ukuze ukuba iminqweno ibe nzulu kunye nokuzanelisa ngokwasemzimbeni kubakho emva kokuba yindlala yomnqweno, okanye ukutshiswa komnqweno, kodwa ngaphandle kwendlela yokuyolisa okanye ukuyolisa. Kodwa ingqondo eneengcinga eziphakamileyo yayifikelela kulo lonke uvuyo lokuzimasa ezi njongo, kuba kukwilizwe apho kukho iingcinga.
Yiyo loo nto sinokuthi emva kokuba ukufa kusichaze isohlwayo okanye umvuzo, okanye ngakumbi ukubizwa ngokufanelekileyo, izifundo zokwenza ngokulungileyo nokungalunganga, njengeziphumo zeengcinga, isenzo kunye nezenzo ezenziwayo ngelixa siphila kwihlabathi lomzimba.
Ngaba abafileyo bafumana ulwazi?
Hayi, azikho ngendlela efanelekileyo yegama. Lonke ulwazi olufunyanwa yingqondo kufuneka lufunyenwe ngelixa uhlala kumzimba wenyama kweli lizwe lokubonakalayo. Apha kulapho kufuneka ufumane ulwazi ukuba ulwazi luya kufunyanwa. Emva kokusweleka sinokuthi sidlule kwinkqubo yokugaya okanye yokuthambisa, kodwa kuphela kwizinto ezifunyenwe kweli lizwe, ngakwicala elinye ukuba inkomo ingahlafuna inwebu yayo isesemkhombeni wayo, kodwa kuphela kwento ebiphethe ngayo. intsimi. Ke umntu oswelekileyo udla ngokuphila okanye adilize loo minqweno, iingcinga, okanye izimvo, eziye zavelisa, zakhula kwaye zalungiswa ngexesha lobomi. Ulwazi lokwenyani lwawo wonke umhlaba kufuneka lufumane ngelixa uhlala kulo mhlaba. Iziko alinakufumana emva kokufa elingazazanga ebomini. Inokukhulisa kwaye iphinde ibuyele kwakhona oko ikwaziyo ebomini, kodwa ayinakufumana ulwazi olutsha emva kokufa.
Ngaba abafileyo bayazi into eyenzekayo kweli hlabathi?
Abanye banokuthi, abanye abanakukwenza. Kuxhomekeka kwinto esiyithetha ngayo “ngabafi.” Imizimba enomnqweno womhlaba kuphela kodidi oluninzi "lwabafi" abanokuthi bayazi into eyenzekayo kweli lizwe. Kodwa ke banokwazi kuphela okwenzekayo njengoko kunxulumene neminqweno kunye neenkanuko zabo ababenazo ebomini, kwaye ukuqhubeka kwazo kuyahambelana. Umzekelo, umzimba onqwenelekayo onxilayo uya kwazi kuphela okwenzekayo emhlabeni njengoko kunxulumene nomnqweno wakhe wokusela kwaye kuxa kunjalo kuphela xa enokufumana indawo yokuhlala nabantu ababelikhoboka lotywala. Unokufumana indawo yommelwane wakhe ngumtsalane wendalo othanda ukuthanda, kodwa ukuze afumane okwenzekayo kufuneka akwenze oko ngomzimba wokomntu oselayo, oya kuyenza ngokungena nokujonga lowo uselayo.kodwa Umnqweno womzimba olinxila awunakuyazi into eyenzekayo kwihlabathi lezopolitiko okanye loncwadi okanye ubugcisa, kwaye ayizukuyazi okanye uyiqonde into efunyenwe kwinzululwazi yeenkwenkwezi okanye inzululwazi yezibalo. Njengoko umntu ngamnye efuna imeko evumelekileyo ngokwenyani ngokwasemzimbeni, ngoko ke imizimba yeminqweno iya kutsaleleka kwindawo ebonakalayo efanelekileyo kubume beminqweno yabo.
Umbuzo ngulo, ngaba banokwazi ukuba kuqhubeka ntoni na kwezi ndawo? Umzimba womnqweno oqhelekileyo awukwazi, kuba awunamalungu omzimba apho unokubona khona izinto ezibonakalayo. Inokuwuva lo mnqweno kwaye ikufuphi nale nto ibonakaliswayo, kodwa ibingayiboni into ngaphandle kokuba ingene emzimbeni womntu kwaye isebenzisa amalungu abonayo okanye ezinye iimvakalelo ukuyidibanisa kunye nomhlaba wenyama. Eyona nto ibalulekileyo, umzimba onomnqweno oqhelekileyo unokubona amaqabane anomdla kwiminqweno yehlabathi.
Ingqondo etyhilile ukunxibelelana kwayo nomzimba kwaye idlule kwilizwe elifanelekileyo yayingazi ukuba kuqhubeka ntoni kwizinto zenyama. Umhlaba wayo ofanelekileyo kuyo izulu lawo. Eli izulu okanye ilizwe elifanelekileyo belinokuyeka ukuba njalo ukuba zonke izinto ezikhoyo emhlabeni ziyaziwa. Iinjongo zomhlaba zehlabathi zinokwaziwa ngofileyo kwihlabathi elifanelekileyo, kodwa kuphela kwezi njongo ziyafana, njengoko kufunyanwa yingqondo kwihlabathi elililo.
Uchaza njani iimeko apho abafileyo babonakala khona ngamaphupha, okanye kubantu abavukile, kwaye baye bavakalisa ukuba ukufa kwabantu abathile, ngokuqhelekileyo amanye amalungu entsapho, sele kusondele?
Iphupha elingabangelwa yimbonakalo yomzimba ivela kwilizwe le-astral okanye kwihlabathi leengcinga. Ukusweleka komntu obhengezwe ephupheni kuthetha nje ukuba lowo ubhengezwe ukuba uswelekile sele ebekwenzile okanye uvelisile unobangela wokumzisela ukufa, kwaye izizathu ezibekiweyo ziyabonakala kwilizwe le-astral. Apho zinokubonakala njengomfanekiso; Zonke iimeko zokuzimasa ukufa zinokubonwa ukuba zifunwa. Ke amaphupha, ngokufa okwenzekayo, njengoko bekuxeliwe, anokubonwa nangubani na onxibelelana nengcinga yangoku ebangele umfanekiso. Kwimeko apho umntu avele ephupheni kuthetha ukuba ukubonakala okunjalo kukhokelela ingqalelo yalowo usephupheni ekufeni okuzayo. Oku kungenziwa nokuba kukuzama ukuthintela ukufa, okanye ukulungiselela oko, okanye njengomzekelo wokuqatshelwa ngabo banomdla.
Kuyafana ke nomgaqo kwimeko apho abafileyo bavele babhengeze ukufa komnye umntu ophaphileyo, ngaphandle kokuba Amehlo omntu aya kuba nokubonakalelwa kwinkangeleko, okanye umbono we-astral ukhawulezise ukuqonda imbonakalo. Izizathu ezifanayo ziya kusetyenziswa. Kodwa umahluko uya kuba kukuba ingqondo ibona ephupheni ngokucacileyo ngakumbi kunobomi bokuvuka, kwaye ke ngenxa yoko inkangeleko ye-astral akufuneki ukuba ibe mninzi, umbono kufuneka uvakaliselwe ngakumbi kwaye neemvakalelo ezibonakalayo ziziswe ukuze zidlalwe. Abafi abaye bavela ngaloo ndlela iya kuba ngumnqweno womzimba oxhunyiwe okanye onxulumene ngandlela-thile nalowo wabhengeza ukusweleka kwakhe. Kodwa bonke abantu ababhengezwe ukuba bafe abasoloko befa njengoko bekuxeliwe. Oku kuthetha (xa umntu engekhohlisekanga ngentsomi) ukuba ezona zinto zifuna ukubulawa azikhutshiwe, kodwa ke oko kufa kuya kulandela ngaphandle kokuba kusekwe ukubala okungafakwanga. Xa inyathelo elifanelekileyo lithathiwe ukubulawa kungathintelwa.
Ngaba abafayo banomdla kumalungu yentsapho yabo ngelixa besemhlabeni, kwaye bawajonga; uthi umama ohambayo phezu kwabantwana bakhe abancinci?
Kuyenzeka ukuba elinye lamalungu osapho ashiyekileyo angatsaleleka komnye okanye kusapho olunye ukuba kukho umnqweno ongazalisekanga obomelele ngexesha lobomi. Umzekelo, njengomntu onqwenela ukudlulisela isixhobo kwenye indawo abenayo ngexesha lokuphila ngobuqhetseba. Nje ukuba kugqitywe ukwenziwa, okanye lowo unikwe ilungelo lokungena, umnqweno uya kuzalisekiswa kwaye nengqondo ikhululwe kumxokelelwane ekubambeni kuwo. Kwimeko yokuba umama abukele abantwana bakhe, oku kunokwenzeka kuphela apho ingcinga yomelele khona ngexesha lobomi kunye namaxesha okufa njengokubamba ingqondo kamama kwiimeko zabantwana bakhe. Kodwa oku kufuneka kukhululwe ukuze umama akhululwe kwaye nabantwana bavunyelwe ukuba benze oko kuye kwenzeka ebomini babo bangaphambili. Emva kokudlula kwihlabathi lakhe elihle okanye izulu, umama oshiyekileyo sele ecinga abantwana abathandayo. Kodwa ingcinga yakhe yabantwana ayinakuphazanyiswa ikwimeko elungileyo, kungenjalo imeko ayizukubalunga. Ukuba abantwana babandezeleka ngekhe akwazi oko ngaphandle kokubandezeleka ngokwakhe, kwaye ukubandezeleka akunandawo kwilizwe elifanelekileyo. Ukubandezeleka kuyinxalenye yezifundo kunye namava obomi apho ingqondo ithwala nzima kangaka ifumana ulwazi kwaye ifunde indlela yokuphila kunye nokucinga nokwenza. Yintoni eyenzekayo kukuba umama, ebambelele ezingqondweni zabantwana abathandekayo kuye, abanokubachaphazela ngengcinga. Akanakho ukubabukela ngokwasempilweni yabo, kodwa ngeengcinga zakhe eziphakamileyo angazidlulisela kubo ezi zinto xa iingcinga kunye nobomi babo buzakuphendula. Ngale ndlela mabangabi ngabantwana babazali kuphela abanokuncedwa ngabo bashiyekileyo, abakwilizwe elifanelekileyo okanye izulu, kodwa bonke abahlobo abangabahambi banokunceda abo baphila kweli lizwe ukuba iingcinga zabo bashiyekileyo beziphakamile kwaye zintle ngexesha labo unxibelelwano kunye nobuhlobo kubomi bomzimba.
Kwihlabathi labafileyo kukho ilanga kunye nenyanga kunye neenkwenkwezi njengehlabathi lethu?
Hayi, ngokuqinisekileyo akunjalo. Ilanga nenyanga kunye neenkwenkwezi kuthiwa yimizimba yenyama kwindalo ebonakalayo. Ngokunjalo azinakubakho, okanye zibonwe zinjalo, emva kokufa; kuba nangona ingcinga yazo inokuthwalwa engqondweni nasemva kokuba ifile ingcinga yahlukile kwizinto. Isazi ngeenkwenkwezi esicinga ukuba sithathwe sisonke sisifundo xa sisaphilayo, sinokuthi emva kokuba sibhubhile sibambeke kumxholo wakhe, kodwa ayizukubona inyanga kunye neenkwenkwezi ezibonakalayo, kodwa ziingcinga zakhe okanye imibono yazo. Ilanga nenyanga kunye neenkwenkwezi zinika izidalwa ezisemhlabeni iintlobo ezintathu zokukhanya kwamandla ahlukeneyo nobunzulu. Ukukhanya kwehlabathi lethu lomzimba lilanga. Ngaphandle kwelanga sisebumnyameni. Emva kokuba umntu eswelekile ingqondo kukukhanya okukhanyisela amanye amazwe njengoko kusenokukhanyisela okwasemzimbeni. Kodwa xa ingqondo okanye i-ego ishiya umzimba wayo wenyama umzimba usebumnyameni nasekufeni. Xa ingqondo yahlula-hlula nomzimba onqwenelekayo, loo mzimba ukwasebumnyameni kwaye kufuneka nokufa. Xa ingqondo idlula kwimeko yayo elungileyo ikhanyisa iingcinga ezifihlakeleyo kunye neenjongo zobomi. Kodwa ilanga lenyama, okanye inyanga, okanye iinkwenkwezi, azinakuphika ukukhanya emva kweminyaka yokufa.
Ngaba kunokwenzeka ukuba abafileyo baphumelele ekuphileni ngaphandle kolwazi ngabaphilayo, ngokucebisa iingcinga okanye izenzo?
Ewe kuyenzeka kwaye kwenzeka njalo ukuba abantu abangabandakanyi izinto ezineminqweno eyomeleleyo kunye nobomi babo obunqunyulweyo babenabo phambi kwabo baxhokonxe abantu ababenakho ukuxhaphaka, ukuba benze ulwaphulo-mthetho ababengenakuba nalo ngaphandle kwempembelelo. Oku akuthethi ukuba isenzo eso sibangelwe yinto yokuchithwa, okanye oko kuthetha ukungabi natyala kwalowo wenza ulwaphulo-mthetho phantsi kwempembelelo enjalo. Kuthetha nje ukuba iqabane elingasasebenziyo liya kufuna okanye litsaleleke kolona hlengahlengiswayo. Owona mntu unokuchukumiseka kakhulu inokuba yindawo ephakathi ngaphandle kwezimvo eziphakamileyo okanye amandla okuziphatha, okanye enye into ezinotyekelo olufana nolombutho oluchukumisileyo. Oku kunokwenzeka kwaye kaninzi kwenziwa ngaphandle kolwazi lwalowo uxhaswe esenzweni. Kananjalo kunokwenzeka ukuba iingcinga, ezinesimo esiphakamileyo, ukuba ziphakanyiswe kwabanye, kodwa kwimeko enjalo akuyomfuneko ukuya kwabafileyo ngeengcinga, kuba iingcinga zabaphilayo zinamandla amakhulu kunye nefuthe kuneengcinga yabafi.